Gaia GPS, GPS, Ipad र मोबाइल मार्गहरू कब्जा गर्न - Geofumadas
गिया जीपीएस, जीपीएस, आईप्याड र मोबाइल मार्गहरू खिच्न
अप्रिल, 2011 Apple - Mac, जीपीएस / उपकरण
म आईप्याडका लागि एउटा अनुप्रयोग डाउनलोड त्यसपछि जीपीएस ट्रयाकिङ के अनलाइन वा Google धरती यसलाई प्रदर्शन गर्न थियो कि आवश्यकता सन्तुष्ट भन्दा बढी मलाई बाँकी छ भनेर।
यो गाइया जीपीएस हो, एक अनुप्रयोग जसको बारे मात्र $ १२ लागत छ तर एप्पल र एन्ड्रोइड अपरेटिंग प्रणालीको साथ मोबाइल फोनका लागि यति कार्यात्मक छ। यसको क्षमताहरू मार्ग खिच्न बाहिर जान्छ, किनकि Everytrail.com को साथमा तपाईं फोटोहरू, Google नक्सामा रूटहरू प्रदर्शन गर्न सक्नुहुनेछ र GPX मा निर्यात पनि गर्न सक्नुहुनेछ यसलाई पारम्परिक ब्राउजरको साथ प्रयोग गर्न र किमीएल यसलाई गुगल अर्थमा थ्रीडीमा हेर्न।
यो खिलौना संग के गर्न सकिन्छ विवरणमा समीक्षा गरौं।
१ आईप्याडको साथ नेभिगेसन
अनुप्रयोग यसलाई मात्र कम गर्न मात्र हो, एक पटक स्थापनाले धेरै दिनचर्याहरूलाई अनुमति दिन्छ जुन मेरो अपेक्षाहरूमा थियो:
तपाई मार्गहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ, जब सुरू गर्ने संकेत गर्दछ, क्याप्चर रोक्दा कहिले जारी राख्छ।
पृष्ठभूमिमा तपाईंले विश्वव्यापी कवरेजको साथ खुला स्ट्रीट नक्सा वा ट्राफिक नक्शाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
१० करोड भन्दा बढी ज्ञात पोइन्टहरू प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, जस्तै हिमाल, नदी क्रसिंग, समुदाय र अन्य चासोका बिन्दुहरू।
जीपीएसले इन्टरनेट जडान भएमा निर्भर गर्दैन, यो अझै पनि क्याप्चर गर्दछ तापनि छविहरूको प्रदर्शनले केवल क्यासमा देखाउँछ भनेर देखाउँछ।
यसलाई रोक्नको लागि, तपाइँ यसलाई प्रदर्शन गर्न छविहरूको मोज़ेकको रुपमा क्षेत्र बचत गर्न सक्नुहुन्छ tileada अफलाइन पनि।
मार्गको छेउमा भण्डारणहरू प्रत्येक ग्राफमा र प्रत्येक क्याप्टिभ पोइन्टको सांख्यिकीय गणना, जुन वास्तविक समयमा देख्न सकिन्छ; भौगोलिक समन्वय वा यूटीएम जस्ता डेटा, वर्तमान गति, यात्राको औसत गति, माथि माथिको सतह माथि, दूरी यात्रा, आदि।
आईप्याडको साथ फोनको तुलनामा अनुभव अझ राम्रो हुन्छ, प्रदर्शनको आकार र औँलाहरू अन्तर्क्रिया गर्न प्रयोग गर्ने सहजिको कारण। त्यसपछि मार्ग भण्डार गर्न सकिन्छ र कुनै पनि समयमा विश्लेषणको लागि redep مامور गर्न सकिन्छ।
उत्तम, यो पृष्ठभूमिमा चल्न सक्छ, ताकि तपाईं आईपैडको साथ वा हाइबरनेट स्थितिमा अन्य कार्यक्षमतामा काम गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि समयमा यो सक्रिय गरिएको छ, र यात्रा रोकिन्छ वा बढेको मेमोरी वा ब्याट्री खपत बिना एक नयाँ सुरू गर्दछ।
२. गुगल नक्सामा प्रदर्शन गर्नुहोस्।
यो गर्नका लागि, तपाईले everytrail.com मा दर्ता गर्नु पर्छ, सहित लग इन गर्दै फेसबुक प्रयोगकर्ताको साथ। त्यसो भए, Ipad बाट मार्ग छोईएको छ र निर्यात विकल्प छनौट गरियो; यसमा नयाँ फाईलको रूपमा भण्डारण गरिएको छ मेरो यात्रा; जुन सार्वजनिक वा निजी हुन सक्छ।
यहाँ राम्रो आउछ, तपाइँ पृष्ठभूमिमा Google नक्शाहरूको तहहरू प्रयोग गर्न देखाउन सक्नुहुन्छ, चाहे उपग्रह दृश्य, राहत, नक्सा वा हाइब्रिड।
रातो रेखा कब्जा गरिएको मार्ग हो। ग्राफ मा, यात्रा प्रोफाइल हल्का निलो र सुन्तला मा किलोमीटर प्रति घण्टा मा यात्रा को गति मा देखाइएको छ। सारांश पनि, त्यस मार्गमा मैले १ minutes मिनेटमा १ kilometers किलोमिटर र लगभग 13०० मिटरको झुकावमा गरे।
त्यो ग्राफलाई तल देखाइएको जस्तो भिडियोको रूपमा चलाउन सकिन्छ, यद्यपि यो ठूलो देखिन्छ अनलाइन.
आईप्याडको जीपीएस शुद्धता?
खराब छैन, यो कुनै पनि ब्राउजर जस्तै छ। And र meters मिटरको बीचमा हिड्नुहोस्; चित्र शो मा स्पष्ट देख्न सकिन्छ; यद्यपि स्थिर वस्तुमा खिच्न प्रयास गर्नु आवश्यक पर्दछ किनकि त्यहाँ गाडीमा 3० किलोमिटर प्रति घण्टाको गति रहेको थियो र केही केसहरूमा यसले क्याप्चरको दूरी दूरी वा सेकेन्डमा परिवर्तन गरेर अन्तर परीक्षण गरिरहेको थियो। दलाल सडकमा, Google ले हिस्पैनिक अमेरिकी देशहरूको प्रायः गैर-शहरी क्षेत्रमा रहेको निशानहरूको साथमा कस्तो फरक फरक छ।
निस्सन्देह, सबै अवस्थामा त राम्रो पतन Google धरती को तस्वीर संग, यन्त्र सटीक अनुपलब्ध किनभने, तर Google को छवि टाढा ठूलो शहर देखि ग्रामीण क्षेत्रमा 10 र 20 मीटर वा एकदम अनियमित topographies बीच displacements छ किनभने जहां भूमि मोडेल को सादगी आफ्नो भौगोलिकरण को प्रभावित गरे।
सम्पादन गर्नुहोस् र अन्य ढाँचाहरूमा निर्यात गर्नुहोस्
अनलाइन यसले नयाँ मार्गहरू थप्न अनुमति दिन्छ, नक्सामा क्लिक गरेर र शिर ठाडो द्वारा सम्पादन सहित; अर्को धेरै राम्रो सुविधा के हो भने तपाईं नयाँ उत्पादन गर्न सक्नुहुनेछ जुनमा ती धेरै मार्गहरूबाट समावेश गर्दछ। खराब छैन किनकि यो GPX मा पठाउन सकिन्छ, यसलाई अन्य उपकरणहरू जस्तै Garman, Magellan, SPOT उपग्रह मेसेन्जर, ब्ल्याकबेरी, इत्यादिमा माउन्ट गर्न। साथै पृष्ठले कुनै पनि जीपीएस नेभिगेटरको साथ क्याप्चर गरिएको GPX फाइलहरू समर्थन गर्दछ।
यसको अतिरिक्त, यो किमिन्डलमा निर्यात गर्न सकिन्छ, जहाँ यसलाई 3D मा हेर्न सकिन्छ।
खराब छैन, निश्चित रूपमा त्यहाँ अन्य अनुप्रयोगहरू छन् तर यो मलाई सबै भन्दा राम्रो लाग्दछ, वेबपृष्ठको कार्यक्षमताहरूको साथमा पूरै रहेको छ जसले अपलोड पिक्चर वा पटरिहरु प्रकारको जीपीएक्स फाइल अपलोड गर्न, सिर्जना गर्न, सम्पादन गर्न वा प्रदर्शन गर्न समाधान गर्दछ।
Everytrial.com मा जानुहोस्
GaiaGPS मा जानुहोस्
Google धरती जीपीएस ipad KML
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो Bentley नक्शा V8 2011 मा परिवर्तन
अर्को पोस्ट आज म केहि फरक गर्न चाहन्छुअर्को »
7 जवाफ "Gaia GPS, GPS, Ipad र मोबाइल मार्गहरू कब्जा गर्न"
जुआन गार्सिया भन्छिन्:
भ्रमणका लागि, पैदल यात्रा, बाइक मार्गहरू, आदि। म GPS TOTAL RUN एप सिफारिस गर्दछु, यसमा कम्पास, एक altimeter छ, यो मार्गहरू रेकर्ड र यो धेरै जानकारी प्रदान गर्दछ
म यसलाई सधैँ मेरो सेल फोनमा लैजान्छु।
खैर, म उसलाई थाहा थिएन, तर पृष्ठ देखेर हेर्दा देखापर्छ।
तपाईं मलाई के गरिरहनु हुन्छ मलाई।
धन्यवाद जी! तपाईले मलाई बचाउनुभयो 10 € हेहे। अब म MotionX जीपीएस नामक एक अनुप्रयोग अनुसन्धान गर्दैछु। के यो आवाज छ? तपाई के सोच्नुहुन्छ? योमा यदि तपाई अफलाइनका लागि नक्सा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जीपीएस पटरिहरु निर्यात र आयोत गर्न को अतिरिक्त।
होईन, यो अनुप्रयोग तपाइँको रूचि छैन। त्यहाँ एक अनुप्रयोग छ अफमाप्स 2
99 सेंट संस्करणले तपाईंलाई दुई शहरहरूको नक्शा डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ, तर भुक्तान गरिएको संस्करण, जुन यूएस।6को लागि चल्छ तपाईंलाई तपाईंलाई चाहिने सबै नक्शा डाउनलोड गर्न दिन्छ। धेरै राम्रो, अर्को समयले मेरो जीवन मेरो देशबाट बाहिर बचायो। यो खुला सडक नक्साको समान आधार हो तर फाइदाको साथ तपाईं यसलाई स्थानीय रूपमा डाउनलोड गर्नुहोस्।
म यस अनुप्रयोगमा आईप्याडको लागि रुचि राख्छु। म तपाईंको पृष्ठमा रहेको छु र यो भुक्तान संस्करणले विश्वको सबै नक्साको साथ ल्याउँछ जस्तो लाग्छ। के यो हो? तर म के मा साँच्चै रुचि छ कि अफलाइन प्रयोग गर्न नक्शाहरू डाउनलोड गर्न सक्षम छ, तर मैले यो कसरी देख्न सकिनँ, र त्यहाँ भुक्तान गर्न को लागी भने। तपाईंको ध्यानको लागि धन्यवाद।
The। लाइट संस्करणले तपाईंलाई लामो मार्गहरू उपाय गर्न अनुमति दिन्छ।
मोबाइल फोन GPS को शुद्धता लगभग एक सामान्य गार्मीन नेभिगेटर जस्तै छ।3र6रेडियस मिटरको बिन्दुको बिचमा जुन तपाईंले लिइरहनु भएको छ।
यद्यपि मैले परीक्षणहरू गरें र म देख्छु कि यी टोलीहरूले रोडमा आन्दोलन लिएको छ, अधिक परिशुद्धता पत्ता लगाउन सक्षम हुन। केवल यसलाई सुरू गर्नुहोस् र पोइन्टहरू लिनुहोस्, यदि तिनीहरू धेरै नजिक छन् भने यसले विकृत जानकारी उत्पन्न गर्दछ।
मेरो भाइसँग एन्ड्रोइडको साथ एक एलजी GT540 सेल छ र जीपीएस छ।
मेरो प्रश्न हो, स्थिर स्थिरतामा यो सही छ? एउटै प्यान खरिद गर्न। hehehe !! GPS को लागी मलाई धेरै ध्यान दिदैन।
र Gais GPS र Gaia जीपीएस लाइटको बीचमा महत्वपूर्ण मतभेदहरू के हो?